4 သင့်ရဲ့ရထားခရီးဆုံးသောထဲက Get စေရန်နည်းပရိယာယ် | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား >4သင့်ရဲ့ရထားခရီးဆုံးသောထဲက Get စေရန်နည်းပရိယာယ်
4 သင့်ရဲ့ရထားခရီးဆုံးသောထဲက Get စေရန်နည်းပရိယာယ်
ဒီရထားခရီးသွားလာသင့်ရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, ဒါဟာအများအပြားရဲ့ပထမဦးဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်ဘယ်သူမျှသံသယရှိပါတယ်. ရိုးရိုးသားသား, ရထားဖြင့်ခရီးသွားလာသူမည်သူမဆိုကအပေါ်လုံးလုံးအရူးသွား၏! အဘယ်ကြောင့်? ကခမ်းနားင်သောကြောင့်! အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်ရေးမပါသောလေယာဉ်စီးဆန့်ကျင်, မသက်မသာဘတ်စ်ကားခရီးစဉ်, သို့မဟုတ်လမ်း - လွန်း - တာဝန်ရှိစီးကားဖြင့်, ရထားခရီးဖြစ်ပါသည် လုံခွုံသော, အမြန်ပေမယ့် မယုံနိုင်လောက်အောင်ချစ်စရာကောင်း နှင့်ရင်ခုန်စရာ. ရထားဖြင့်ခရီးသွားခြင်းသည် Virginia Woolf မရှိသောစိတ်နှင့်ခေတ်သစ်လက်တွေ့ကျသောရောနှောမှုတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုအငြင်းပွားဖွယ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်. ah, သငျသညျပြီးသားကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့မြင်ပါလိမ့်မယ်.
သငျသညျပြီးသားသင့်ရဲ့လက်မှတ်အဆင်သင့်ရရှိပါသည်ကတည်းက - ကဒီမှာနေကြသည်ကိုအကောင်းဆုံး4သင့်ရဲ့ရထားခရီးထဲကအများဆုံးရရန်နည်းဗျူဟာ:
သင့်ရဲ့ Laptop ကိုကနေအဝေးနေဖို့ & ဖုန်းနံပါတ်
ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏ laptop ကိုမှာတစ်ခုလုံးကိုခရီးစဉ်စိုက်ကြည့်ကိုရှောင်ရှားဖို့အထူးအကြံပြုလိုတယ်ချင်ပါတယ်, သငျသညျဤမျှလောက်ပေါ်ထွက်ပျောက်ဆုံးပါလိမ့်မယ်အဖြစ်! အစား, လှည့်ပတ်ကြည့်ရှု, ဖြစ်ပျက်ရဲ့အဘယ်အရာကိုမြင်; ပြတင်းပေါက်အမြင်ပျော်မွေ့နှင့် အံ့မခန်းသဘောသဘာဝ အပြင်မှာ. သငျသညျအများအားဖြင့်လုပ်ဖို့အချိန်မရှိဘူးသင်တို့ပတ်လည်ကိုလူစောင့်ရှောက်မှုအရာတို့ကိုစဉ်းစား. ဒါဟာရန်ပြီးပြည့်စုံသောအခွင့်အလမ်းဖွင့် သင့်ရဲ့နေ့စဉ် gadgets ၏ချွတ်နဲ့ပတ်သက်လို့အဆိပ်ဖြေပေးပါတယ် နှင့်တစ်ဦးရထားခရီး၏လှပသောရှုပ်ထွေးလက်ခံ – ဘယ်နေရာမှာမဆို.
ငါတို့သည်သင်တို့ Ethan Hawk ကြောင်းရှိသည်လိမ့်မယ်အာမခံချက်မပေးနိုငျ – သင်ပထမဦးဆုံးပေါ်ဂျူလီ Delpy ရထားခရီးအခွအေန ရထားစီးနင်း (Oh, လာစမ်းပါ, ငါတို့ရှိသမျှသည်မြင်ကျော် swooned င့် Trilogy မီ, လြှို့ဝှကျစှာ, ကျနော်တို့အတူတူချစ်ခြင်းမေတ္တာဇာတ်လမ်းကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်ပျက်ရှိသည်လိမ့်မယ်မျှော်လင့်။) သင့်ရဲ့ shell ကိုထဲကခြိုးဖကျြမြားနှငျ့အတှေ့အကွုံပေါ်ပေါက်ပါစေ. ဘယ်နှစ်ယောက်အသိဉာဏ်, ရတာဟာ, ပျော်ရွှင်စရာစကားပြောဆိုမှုများကိုသင်ရပါလိမ့်မယ်? အဆိုပါအတွေ့အကြုံနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောယဉ်ကျေးမှုများ၏လူတို့နှင့်အတူဆက်ဆံဖို့ရတဲ့တစ်စိတ်ကူးခံစားချက်ဖြစ်ပါသည်! သငျသညျမည်မျှလှပသောသိဘယ်တော့မှမ သငျသညျတညျဆောကျပါလိမ့်မယ်မိတ်, ဘယ်လောက်နှိပ်စက်လိမ့်မယ်, သို့မဟုတ်သင်မည်မျှတွေ့ကြုံရမည့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးများနှင့်တွေ့ဆုံနိုင်မည်နည်း. သငျသညျလညျးအရှက်မရတယ်ဆိုရင်, သင်စိတ်ဝင်စားသည့်ရေခဲကိုချိုးဖျက်နှင့်လူစကားပြောဖို့ပထမဦးဆုံးတဦးတည်းဖြစ်.
အဘယ်အရာကိုမျှပတ်ပတ်လည်ခရီးသွားလာနှင့်သင်၏ရန်ရထားခရီးယူပြီး beats ဥရောပ၌အကြိုက်ဆုံးမြို့ကြီးများ လူမျိုး၏အုပ်စုတစုအားဖြင့်သင်တို့ကိုကိုးကွယ်. ဟုတ်ကဲ့, ခင်ဗျားစဉ်းစားအဘယ်အရာကိုကြှနျုပျတို့သိကြပါ – အဘယ်သို့ငါလူတိုင်း၏ဆန္ဒမှတဆင့် multitask ပါလိမ့်မယ်, တောင်းဆိုမှုများ, လူတိုင်းရဲ့ဒေါသကို, နှင့် Pre-စီစဉ်ထားနေရာများ – ကျနော်တို့ကြောင်းပေါ်သငျနှငျ့အတူအတန်ငယ်နေ. ဒါပေမဲ့, အရာဖြစ်ပါသည် – သငျသညျကောင်းစွာစုစည်းနှင့်သင်ဤခရီးစတင်မီရိုးသားဆွေးနွေးချက်ရှိပါက, အမှုအရာကိုသင်စိတ်ကူးနိုင်သည်ထက်ပိုမိုကောင်းမွန်ပါလိမ့်မည်.
အုပ်စုများအတွက်ခရီးသွားလာ နှင့်အထူးနေ့ရက်ကာလ၌ ရထားလက်မှတ်ဘို့သိသိသာသာစျေးနှုန်းလျော့နည်းစေတယ်လေ (ဟုတ်ကဲ့, သင်အမှန်တကယ်ရန်သင့်လက်မှတ်အပေါ်တစ်ဦးလျှော့စျေးရနိုင်, ပွောဆို, Trenitalia သင်တို့အပေါ်မှာသွားလျှင် တနင်္ဂနွေ). ၎င်းသည်သင့်အားတစ်စုံတစ် ဦး ကိုအတွေ့အကြုံမျှဝေရန်နှင့်အခြားသူများ၏အမြင်များမှအရာများကိုကြည့်ရှုရန်ပေးသည်. ထို, နှင့် – နိုင်ငံခြားဥရောပတိုင်းပြည်တွင်အရက်မူး သင့်ထက်ကိုသိသောလူတို့တွင်ကျိန်းသေသည် သာ. ကောင်း၏ တစ်ကိုယ်တော်ကြောင့်လုပ်နေတာ… ငါတို့မှန်တယ်, ဒါမှမဟုတ်ငါတို့မှန်ပါတယ်?
တစ်ဦးရထားခရီးဂျာနယ် Start & ဓာတ်ပုံရိုက်
ရထားပေါ်တွင်သင်၏အချိန်ကိုအသုံးဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ဦးကသင့်ရဲ့မှတ်တမ်းတင်နေတဲ့ဂျာနယ်စတင်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည် အတွေ့အကြုံများ. ငါတို့ရှိသမျှသည်လမ်းလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေ၌ထရစ်ပတ်နေ, ရုံးဘဝတွေကို, ကျွန်တော်တို့ဟာအများအားဖြင့်ပြုလုပ်ပြဿနာစိတ်ကိုဘောင်မှထွက်ခြေလှမ်းနှင့်ဒုတိယများအတွက်အသက်ရှူဖို့မေ့လျော့သောနေ့စဉ်ပြဿနာများ. တစ်ဂျာနယ်ရေးသားခြင်းအချို့ကိုသင်ရှုထောင့်ကိုငါပေးမည် အမှုအရာပေါ်, သင်တစ်ဦးအနေဖြင့်အပြီးပြန်သွားပါ, အထူးသဖြင့်လာသောအခါ. Plus အား, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ခရီးတစ်ခုအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့မှတ်ဉာဏ်ဖြစ်လိမ့်မည်, သငျတို့သခံစားမိချင်သောအရာတို့ကိုသတိပေး / နောက်တဖန် / အတွေ့အကြုံကိုထင်.
သင့်ရဲ့ခံစားကြည့်ပါ ရထားခရီးစဉ်, အနားယူရန်သင့်ကိုယ်သင်ခွင့်ပြုချက်ပေးပါ, သင်၏ရထားခရီးနှင့် ပတ်သတ်၍ အားလုံးကိုလက်ခံပါ! သင်၏ရထားလက်မှတ်များကိုမှာယူရန်စိတ်အချရဆုံးနေရာမှာဖြစ်သည် saveatrain.com သေချာသည်, ဒါကြောင့် – movin 'get!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-journey-4-tactics%2F%3Flang%3Dmy- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/tr_routes_sitemap.xml, သင် / TR မှ / fr သို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများပြောင်းလဲနိုင်သည်.
အကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား traveltips
ရထားအားဖြင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းခရီးသွား, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ရထားခရီးသွားယူကေ, ဥရောပခရီးသွား
ရထားခရီးသွားခြင်း, ရထားခရီးသွားစပိန်, ခရီးသွားလာရေးသိကောင်းစရာများရထား, ဥရောပခရီးသွား